यसरी चल्दै छ विदेश सम्बन्ध: भारत र चीनसँगको उपलब्धि के ? – ToplineKhabar
यसरी चल्दै छ विदेश सम्बन्ध: भारत र चीनसँगको उपलब्धि के ?
February 9, 2017 प्रदीप भट्ट0Comment
काठमाडौं – भारतसँगको सम्बन्ध सुधार्न सफल भए पनि त्यो विषयमा देशलाई एकमत बनाउन सरकार असफल भएको खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छ ।
– नेपाल–चीन पारवहन तथा यातायात सम्झौताको आउटलाइनमा सहमति । नेपालले मस्यौदा प्रोटोकल तयार गरी चिनियाँ पक्षलाई राय–सुझाबका लागि पठाउने सहमति । यसबारे वाणिज्य मन्त्रालयसँगको समन्वयमा अन्तिम मस्यौदा तयार हुँदै ।
– कार्गो यातायातसम्बन्धी प्रोटोकलमा तिब्बत हुँदै नेपालका उत्तरी जिल्ला जाने नयाँ मार्ग थप गर्नेलगायतका विषयमा छलफल ।
– तिब्बतका राजमार्ग उपयोगसम्बन्धी प्रोटोकलमा चिनियाँ पक्षबाट मस्यौदा प्राप्त भएको र चीनलाई जवाफ पठाउने तयारी । छिट्टै नेपालमा सशोधित प्रोटोकलमा छलफल गरी हस्ताक्षरका लागि नेपालमा बैठक आयोजना गर्ने सहमति ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका असफलता
राजदूत नियुक्ति हुन सकेको छैन
१३ नियोगमा राजदूत खाली भएको तीन वर्ष भयो । अघिल्ला सरकारजस्तै यो सरकार पनि नियुक्तिमा पछि परेको छ । भारत र चीनका लागि राजदूत भने नियुक्त भएका छन् । परराष्ट्रका एक अधिकारी भन्छन्, ‘यो दुवै छिमेकीलाई समान प्राथमिकता र महत्व दिएको सन्देश हो ।’
चीन र मंगोलियन नेताको एकैदिन भ्रमण
चिनियाँ नेता लिउ छिपाओ र मंगोलियाका विदेशमन्त्री चेन्द मुख अर्गिलको भ्रमण एकैदिन ३ पुसमा भयो । जब कि दलाई लामाले मंगोलिया भ्रमण गरेकोमा चीनले मंगोलियामा नाकाबन्दी लगाएको थियो । तर, मंगोलियाका विदेशमन्त्रीको भ्रमण एक महिनाअघि र चिनियाँ नेताको भ्रमण एक साताअघि तय भएको परराष्ट्रमन्त्रीको भनाइ ।
विदेश नीति परिमार्जन गर्ने कार्यदल बनेन
विदेश नीति परिमार्जनसम्बन्धी कार्यदल बनाउने परराष्ट्रमन्त्रीको प्रयास एमालेले सहमति नजनाएपछि सफल हुन सकेन । यद्यपि उनले परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान पुनर्संरचनाका लागि पूर्वराजदूत डा. दिनेश भट्टराई संयोजकत्वको गठित कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाउँदै छ ।
← एमालेलाई प्रचण्डको प्रश्न– निर्वाचनको घोषणा होइन, प्रक्रिया नै अघि बढिसक्यो, अझै कति भ्रम छर्ने ?
आईजीमा तीव्र मनमुटाव: बिहीबारको क्याबिनेट निर्णय सर्ने संकेत →
गोर्खा सैनिकले बेलायती बराबर पेन्सन नपाउने फैसला